विकास बजेट नै कानून हो : मुख्यमन्त्री – SaipalNews.com
पुस १८ दाङ । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विकासलाई पनि कानूनकै रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको ‘जिल्लाको विकास, सम्भावना र चुनौती’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले संसद्बाट पारित भएको बजेट नै एउटा कानून हो भन्नुभयो ।
अहिले विभिन्न बहानामा विकासका कामहरु अवरुद्ध गर्ने कार्य भएको भन्दै यसले विकास र समृद्धिमा धक्का पुग्नेसमेत बताउनुभयो । कानूनी तथा व्यावहारिक रुपमा मिल्ने कुरालाई मिलाएर विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेसमेत उहाँको भनाइ छ ।
व्यावहारिक पक्षलाई मिलाएर कानून कार्यान्वयन अगाडि बढाउनुपर्ने पोखरेलले बताउनुभयो । “कानून संरक्षक हुनुपर्ने हो, तर त्यसलाई टेकेर विकासलाई बाधक बनाउने काम भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । अहिले दाङमा ढुङ्गाजन्य पदार्थ आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको भन्दै यसलाई सहज बनाएर विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउनुपर्नेसमेत बताउनुभयो ।
उहाँले पहिलो चौमासिकमा १५, दोस्रो चौमासिकमा ४० र बाँकी चार महिनामा विकास योजना पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिले कच्चापदार्थ उपलब्ध नभएको नाममा निर्माण व्यवसायीले विकास निर्माणको कामलाई ठप्प पार्ने गरेको भन्दै यसले विकासलाई ठूलो क्षति पु¥याउने बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा अहिले तीन तहका सरकारको कानून बाँझिदा काम गर्न कठीनाइ भएको स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका थिए । त्यस अवसरमा दाङका सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले विकास निर्माणका बारेमा अवगत गराएका थिए ।
अष्ट्रेलियाले जित्यो ओडिआई सिरिज
सुरक्षाकर्मीले सलमान खानलाई विमानस्थलमा रोकेपछि…
केही हराइरहेको थियो ! तर के ?
ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश
नेपाली काँग्रेस डोटीले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाइ विरोध पत्र